Munamato wekuvhiyiwa. ? Pamberi pekupindira.
Munamato wekuvhiya kana iwe uchida kuisa mumawoko epamusoro kuve zvese zvinonetseka zvinoita kunge zvinotora pfungwa.
Munguva dzino, kuva nekutenda kunamatira kunogona kuve kwakakosha, uye kutenda mumunamato kunotipa rugare nerunyararo.
Kana zvasvika kune mashandiro hapana chinhu chiri nani kupfuura kuisa zvese mumaoko emusiki iye Mwari wezvinhu zvese.
Izwi raMwari rinotiudza kuti muporese wedu uye hapana chinhu chatinokumbira kuna Baba kuti vatipe. Ipapo tichakusiya iwe munamato waunofanirwa kuita usati wapinda kuvhiya.
1 Munamato wekuvhiya chii?
1.1 Pamberi pekuvhiya
1.2 Munamato wekushanda kwehama
1.3 Zvekuti zvese zvinofamba mushe mushe
2 Iwo mutsara uchaenda kubasa here?
Munamato wekuvhiya chii?
Asati, panguva uye mushure mekuvhiyiwa pane nguva dzekushungurudzika uye dzemaronda.Munamato unogona kudzikamisa pfungwa dzese dzisina kunaka wakatiita kuti tiwedzere kutenda.
Tinofanira vimba neshoko raIshe Anoti isu tinochemera iye uye anozotidzidzisa zvinhu zvikuru uye zvakavanzika, chimwe chezvinhu izvozvo chingave kupora kwemuviri wedu, iko kugadzikana kwekuziva kuti Mwari vari kuita chimwe chinhu mukuda kwedu uye nekutenda kwekuziva kuti ndiye anoita shanda matiri.
Kune uyu wese munamato wakakosha panguva dzese dzekunetseka kuti sevanhu isu tinoratidzwa kurarama.
Jesu Kristu pachake anotikumbira kubvunza baba muzita rake, saka minamato yedu inogara iri muzita raJesu, tichimuziva iye Mwanakomana wa Mwari, vese vane simba kutiporesa uye kuzadza moyo yedu nerugare.
Kugadzira mutsara usati wapindirwa nekupindira kunogona kutibatsira kuita sarudzo dzakanaka sachiremba, nzvimbo yehutano, mazuva uye kunyangwe nzira yekuvhiya kwaachaita.
Naizvozvo zvakakosha kwete chete namata usati tapinda mukamuri yekuvhiya asi kana chirongwa chechipatara chose chisati chatanga.
Mwari munondida, nditarisirei uye mundichengetedze
Ipa huchenjeri uye hunyanzvi kuvanachiremba nanamukoti
Vaitei vakwanise kukushandira nerudo uye nekuzorora
Kuburikidza naJesu Kristu, Tenzi wedu
Chinangwa chekunamatira pamberi pekuvhiya nguva dzose ndechekuti Mwari anotora kutonga kwezvese zviri kuda kuitika mumuviri wedu uye kuti zvese zvinofamba zvakanaka, izvo zvikumbiro zvinowanzoitika.
Mumunamato, zvinofanirwa kuve pachena kuti isu tiri kutarisana nechinguvana umo tisina chekutonga pane izvo kana zvisiri uye ndicho chikuru chikonzero chinoita kuti tinzwe kusachengeteka.
Taura naMwari, taura zviri kunetsa, muudze nezve kusagadzikana, kutya uye nezvese zvaunonzwa, zvakanaka nezvakaipa.
Daidzira zvinonzwika kuti anokupa kutonga kwehupenyu hwako uye unomutenda nekukupa kukunda.
Munamato wekushanda kwehama
Changamire, vazhinji vanachiremba, vanoda basa ravo
Ivo vari pabasa redu.
Ndatenda nekuda kwechipo chehungwaru
Nhasi, hupenyu hwakawanda hwakaponeswa mune zviitiko zvekare
Ivo vangadai vasina kuwana chero mushonga kana kurapwa.
Ishe, rambai muchiva
muridzi wehupenyu uye rufu.
Mhedzisiro inoguma iri mumaoko ako eVamwari.
Ishe, vhenekera pfungwa nemoyo
vanotarisira kuporesa muviri wangu unorwara
uye tungamira maoko ake nesimba rako reWamwari.
Maita basa nemutsa wenyu mukuru.
Kana iyeye ari kuda kupinda mubedheni yekushanda ihama, iyo munamato Inofanirwa kuitwa isati yakwana uye ichichengetwa mukuita kwacho kwese.
Izvo zvakakosha kuti tizive nzira yekuendesa masimba akanaka kune nhengo yemhuri yedu isati yapindirwa, izvi zvinokubatsira kuti urambe uine tariro uye nekutenda kunoshingaira.
Hatigone kunyengeterera nhengo yemhuri nehunhu husina kunaka kana kusava nechokwadi nezvingaitwe naMwari panguva ino, asi isu tinofanira kuchengetedza hunhu hwemutendi hunopa simba, kurudziro, rutendo uye ushingi kunhengo yemhuri isati yaitwa opera uye pakupera kwezvese. Unofanira kugara uchitenda Mwari.
Zvekuti zvese zvinofamba mushe mushe
Baba Vekudenga, ndinokumbira kuti muchengete uye mundidzivirire
Ndibatsireiwo kuvimba nemi
Uye kuva neushingi hwakakwana kuzviita kuvhiya uku
Teererai kutya kwangu uye kunetseka kwangu
Uye uve nechokwadi chekuvapo kwako
Tungamira uye ropafadza vanovhiya kuitira kuti vazive chaizvo zvavanofanira kuita
Komborerai kurapwa kose nekutarisirwa kwandichapihwa
Ndisimbisei nesimba renyu
Saka ndinogona kunzwa zviri nani uye ndichipora
Kukumbira Mwari kuti atumire vatumwa vake kuti vatichengete mukamuri rekuvhiya uye, saizvozvo, tichimukumbira kuti asunge chero mweya wetsvina unoda kupindira zvikumbiro zviviri zvakanaka zvatingaite chero nguva.
Zvakakoshawo kuti isu tigozivisa newe zvinonzwika zvese zvakanaka izvo zvatinoda kuona kuitira kuti izvo zvakanaka masimba zvaburitswe uye izwi rizadzikiswe muhupenyu hwedu kana mune chero yemhuri yemhuri, shamwari kana munhu waanoziva ari kuda kupinda mune imwe yemaitiro aya.
Iwo mutsara uchaenda kubasa here?
Kungove uchinamata kuchaita kuti kuve kwakachengeteka uye kwakanyarara.
Hakuna chinhu chiri nani kupfuura kuvimba naMwari nguva dzese.
Kana uine rutendo mumoyo mako, Mwari vachakubatsira munguva ino yakaipa. Minyengetero ine zvipupuriro zvekubudirira mune zvese nyika.
Ingonamata chete uine kutenda kwakawanda mukati mako kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka.
Wakanga uri munamato wekuvhiya kune zvaunofarira here?
Kana iwe uine chero mazano emunamato, usazengurira kutaura pamusoro peichi chinyorwa.
Nenzira iyi batsira vamwe vanhu vanozotarisana nedambudziko rimwe chete iro zvatoitika.
Mimwe minamato kuna Mwari: